Iingcaciso zeMveliso zeTekhnoloji | Iindaba zeGajethi
Icandelo lezobuchwephesha liphila kakhulu. Yonke imihla iimveliso bonisa iimveliso zeteknoloji ezintsha ukuzama ukuthengisa kwimarike kunye nabathengi. Ukusuka kwi-Gadget ye-Actualidad sikuzisa zonke iindaba zeziganeko zokubonisa zazo zonke iintlobo zezixhobo.
Ufuna ukubuyekeza Zeziphi iimveliso ezinje ngeSamsung, LG, Sony, Apple, Xioami nezinye ezininzi ezikhoyo? Ewe, ungaphoswa leli candelo. Siyakunika imifanekiso ekhethekileyo kunye neevidiyo yenziwe liqela lethu labahleli.
Iindaba zamva nje kwinkcazo yemveliso
por UPaco L Gutierrez yenzayo Iinyanga ze7 .
Kancinci inani leelaptops ezihlaziya iicomputer zazo kwisizukulwana esitsha se-Intel ngu ...
Iitafile ziimarike ekubonakala ukuba zifile, nangona kunjalo zisenomdla kakhulu kuluntu, kwi ...
I-subsidiary ye-Xiaomi ebizwa ngokuba yiPocophone yafika kwiminyaka emibini edlulileyo kwimarike yaseSpain kunye nePoco F1 yayo, isiphelo ...
por U-Eder Esteban yenzayo 2 iminyaka .
I-Galaxy Note 10 kunye ne-10 + zisemthethweni, sele siyazi into esishiyelwa yiSamsung ngesiphelo sayo esitsha….
por URafa Rodríguez Ballesteros yenzayo 3 iminyaka .
Oko besikubhengeza, ibingumcimbi nje wexesha ngaphambi kokuba isigebenga esinekomkhulu uG sibe nomdla kwimidlalo yevidiyo….
Le yimodeli entsha nenomtsalane yeTesla Model Y
Kwaye emva kweeveki ezimbalwa apho no-Elon Musk ngokwakhe wongeza ukuthandabuza kunye nokuhlekisa ...
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba umenzi waseAsia uHuawei akabanga nje yenye into ngaphakathi ...
Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo besingazi ukuba lo ingangunyaka wokusonga ii-smartphones. Amarhe, uqikelelo kunye nokunye ...
U-Sony waphinda wasenza savuka kwangoko kumnyhadala wefowuni obhekisa kuwo, i-MWC. Inkampani iphehlelele ...
BesinoFebruwari 20 ephawulwe kwikhalenda ixesha elide. Namhlanje ekugqibeleni ibe lusuku lweSamsung, ...
Namhlanje lusuku lokumiliselwa kwaye ekugqibeleni siya kuba nakho ukubona ngokusesikweni imodeli entsha yeHuawei Mate, ...